Archives Research - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Podcast-kan cusub, oo ay soo saartay Berghof Foundation, waa qayb ka mid ah mashruuca 'Waxbarashada Nabadda ee Gobolka' oo ay maalgeliso Hay'adda Jarmalka ee Cilmi-baarista Nabadda waxayna diiradda saartaa waxbarashada nabadda ee dugsiyada ku yaal dalalka Jarmalka ku hadla. [sii wad akhriska…]
Raadinta Nabadda: Ethnography ee dugsiga sare ee Hindiya
Ashmeet Kaur's cilmi-baarista dhakhtarka cinwaankeedu yahay 'In search of peace: Ethnography of an elite school in India' (2021) waxay sahamisaa habaynta waxbarashada nabadda ee dugsiga rasmiga ah. [sii wad akhriska…]
Bishii Abriil 2021, Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (GCPE) ayaa sameeyay sahan diiradda saaraya dhalinyarada si ay si wanaagsan u fahmaan wacyiga iyo xiisaha waxbarashada nabadda iyo caddaaladda bulshada ee dugsiga sare iyo dhalinyarada da'da kuleejka. Warbixintani waa natiijada ka soo baxday ololaha caalamiga ah ee natiijooyinka iyo falanqaynta. [sii wad akhriska…]
Qiimaynta Manhajka Dugsiga Sare Iyadoo la Tixgalinayo Waxbarashada Nabadda ee Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan)
Shahaadada dhakhtarnimada ee Sufi Amin waxa ay falanqaynaysaa manhajka heerka dugsiga sare iyo buugaagta waxbarashada ee Gobolka Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, iyada oo la tixgelinayo qaabka aasaasiga ah ee waxbarashada nabadda. [sii wad akhriska…]
Aqoonta duni adag: Dib u eegista doorarka cilmi-baarista nabadda iyo waxbarashada nabadda (fiidiyow)
Mu'asasada Berghof iyo Machadka Cilmi-baarista Nabadda iyo Siyaasadda Amniga ee Jaamacadda Hamburg ayaa martigeliyay Noofambar 25 dood cilmiyeed ku saabsan sida waxbarashada nabadda iyo cilmi-baarista nabadda ay uga falcelinayaan caqabadaha hadda jira ee caalamiga ah. Muuqaalka dhacdada hadda waa la heli karaa. [sii wad akhriska…]
Doorka dhaqanka dugsiga ee horumarinta xirfadda macalinka ee waxbarashada nabadda: kiiska Sukma Bangsa School Pidie ee colaadda ka dib Aceh, Indonesia
Cilmi-baarista Dody Wibowo waxay sahamisaa xiriirka ka dhexeeya ku-dhaqanka dhaqanka dugsiga iyo horumarinta xirfadda macalinka ee waxbarashada nabadda ee Indonesia. [sii wad akhriska…]
Qormadan uu qoray Jamie Wise waxay tixgelinaysaa doorka waxbarashada taariikhda ee qaabaynta xusuusta wadajirka ah iyo xiriirka kooxaha dhexdooda ah (ka dib) xaaladaha isku dhaca. Waxbarashada taariikhdu waxay la xidhiidhaa waxbarashada nabadda iyada oo xoogga la saarayo sida sheekooyinka ku saabsan rabshadihii hore loo yeedhay loona dhisay goobaha waxbarashada ee isku dhaca. [sii wad akhriska…]
Cilmi -baarista Fatih Yilmaz wuxuu sahamiyaa sida ardayda dugsiga hoose u arkaan fikradaha nabadda iyo rabshadaha nolol -maalmeedkooda. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada nabadda ee dugsiyada sare ee Rwanda: La qabsiga farriimaha is burinaya
Daraasadani waxay sahaminaysaa sida, intii lagu guda jiray hirgelintiisa, manhajka nuxurka nabdoonaanta ay la kulmeen caqabado la xiriira nuxurka laftiisa, fuliyayaashiisa iyo bay'ada ay tahay inay horumariso. [sii wad akhriska…]